Spain inoisa hafu-yezana anti-rekodhi yenhamba yevashanyi mu2020
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Spain inoisa hafu-yezana anti-rekodhi yenhamba yevashanyi mu2020
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kunze kwenyika kushanya kuSpain kwakadzika muna 2020 nekuda kwepasi rose COVID-19 denda uye zvifambiso zvekufambisa zvakaitwa nehurumende dzenyika
2020 rakazove rakaipisisa gore rekushanya kweSpain muhafu yezana ramakore
Mari yevashanyi muSpain yakadzika kupfuura makumi manomwe neshanu muzana
COVID-19 denda raikanganisa indasitiri yekushanya yeSpain
Nemhaka ye Covid-19 denda, kushanya kwekushanya kuenda kuSpain gore rapfuura kwakadzikira ne77.3% zvichienzaniswa ne2019, maererano nedata kubva kuNational Institute of Statistics (INE).
Mamiriyoni 18.9 vanhu vakashanyira Spain mu2020.
Iyi ndiyo nhamba yakaderera mumakore makumi mashanu apfuura. Spain yakagamuchira mamirioni makumi maviri evashanyi muna 50.
Vazhinji vevashanyi vakashanyira Spain vaibva kuFrance - 3.9 miriyoni vanhu. Nzvimbo yechipiri yakatorwa nemaBritish - 3.2 mamirioni evashanyi, uye nzvimbo yechitatu yakatorwa nemaGerman - 2.4 miriyoni vanhu.
Canaries, Catalonia neValencia ndidzo dzaive nzvimbo dzinozivikanwa dzeSpanish pakati pevashanyi.
Iko 2020 yekushanyirwa kwevashanyi vekunze kuSpain yaisvika 19.7 bhiriyoni euros, nepo mugore rapfuura vashanyi vekunze vakashandisa 91.9 bhiriyoni munyika.